Jurgen Klopp Oo Ku Dawakhsan Xulashada Laacibkii Buuxin Lahaa Booska Sadio Mane Oo Dhaawac Ah | Laacib.net
Jurgen Klopp Oo Ku Dawakhsan Xulashada Laacibkii Buuxin Lahaa Booska Sadio Mane Oo Dhaawac Ah
January 28, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on Jurgen Klopp Oo Ku Dawakhsan Xulashada Laacibkii Buuxin Lahaa Booska Sadio Mane Oo Dhaawac Ah
Liverpool waxay u dhoweyd inay iska fududayso culaysyada oo ay u gudubto wareegga shanaad ee tartanka FA Cup oo Axaddii ay la ciyaartay Shrewsbury Town, laakiin Jason Cummings oo beddel kusoo galay xilli ay ciyaartu qaybtii dambe 2-0 ahayd, ayaa dhaliyey laba gool oo madax xanuun ku riday Klopp oo ku Reds ku qasbay in ciyaar ku celis ah ay isla tagaan Anfield.
Ka hor inta aanay la ciyaarin Shrewsbury, Liverpool waxay habeen dambe iska hor iman doonaan West Ham oo ay kala bixi doonaan ciyaar baaqi u ahayd oo kooxda tababare Klopp ka caawin karta in ay 19 dhibcood oo nadiif ah ku qabato hoggaanka horyaalka.
Ka hor labadan ciyaarood, tababare Klopp waxa uu haystaa mushkilado la xidhiidha xulashada ciyaartoygiisa iyo sidii uu u buuxin lahaa booskii Sadio Mane oo dhaawac soo gaadhay ciyaartii Wolves.
Naby Keita oo isaga oo qaab ciyaareed wanaagsan ku jira uu dhaawac soo gaadhay January 2 xilli ay isku kululaynayeen ciyaartii Sheffield United, waxa dib usoo laabtay Axaddii oo uu kaydka kusoo bilowday.
Laacibkan oo 52 milyan oo Gini ay kusoo iibsatay Reds, waxa la filayaa inuu kusoo bilowdo ciyaarta habeen dambe ee West Ham United ay martida ugu noqonayaan. Jordan Henderson iyo Gini Wijnaldum ayay ku mataanaysnaan doonaan khadka dhexe sida uu qoray wargeyska Liverpool Echo, laakiin waxa doorashooyin u ah Alex Oxlade-Chamberlain iyo Adam Lallana oo ay su’aal ka taagan tahay sida uu tababare Klopp u kala xulan doono.
Ka hor inta aanay London Stadium soo gelin, tababare Klopp waxa kale oo ay tahay inuu ka jawaabo midka uu kusoo bilaabayo Takumi Minamino iyo Origi si midkood u buuxiyo booskii Mane.
Laacibka reer Japan si fiican ayuu u ciyaaray kulankii Everton ee bishii hore oo uu kusoo bilowday, laakiin kulankii Wolves markii lagu soo beddelay Sadio Mane oo dhaawacmay, waxa uu istaagay garabka bidix oo kusoo istaagay ka hor intii aanu u shax-guurin ee aanu dhexda soo gelin. Ciyaartii Shrewsbury na, waxa uu si buuxda uga ciyaaray weerarka tooska ah (No9) maadaama uu fadhiyey Roberto Firmino, waxaanu ku dhowaaday inuu gool madax ah dhaliyo dhamaadka qaybtii hore.
Divoc Origi oo ay kulanka u dambeeyey iska garab ciyaarayeen Minamino, waxa uu ahaa mid aan saamayn badan lahayn, garoonka Montgomery Waters Stadium na uu aad ugu ballaadhan.
Kulanka West Ham, Klopp waxa uu u baahan yahay inuu kala doorto Minamino iyo Origi, haddii aanu shaxdiisa beddelin oo aanu ka dhigin 4-4-2 oo afar dhex ah aanu u guurin.
Walaac kale oo haysta Jurgen Klopp waxa uu yahay khadka dhexe ee reer Brazil ee Fabinho oo bishii December oo dhan dhaawac u jiifay ka hor intii aanu horraantii bishan kusoo laabanin tababarka.
27 November ayuu dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii Napoli oo ay isku dhaceen Hirving Lozano, waxase uu dib usoo laabtay January 19 oo ahayd ciyaartii ay ku karbaasheen Manchester United.
90 daqiiqadood oo uu ciyaaray kulankii Shrewsbury waxay muujiyeen in aanu kusoo noqonin heerkiisii hore oo uu wax u dhimay dhaawacii.
Si kastaba ha ahaatee, Jurgen Klopp waxa uu ku jiraa xaalad adag oo dhinaca kala xulashada ciyaartoyga ah oo qasab ka dhigi karta inuu beddelo qaab-ciyaareedkii u horseeday guulaha ee 4-3-3.